Layma's World: SHELTER
Posted by lay-ma at 5:51 AM
ဗိသုကာ တစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်လေး ချပြသွားတယ် ကောင်းတယ်ဗျို့ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ ကျောချစရာနေရာတစ်ခုရရင်တော်ပါပြီး တိုက်ဆောက်ဖို့ဘီလပ်မြေ တို့ထုံးတို့မ၀ယ်နိုင်လို့:P
shelter ဆိုတာ ဘာလဲ တော့မသိဘူး။ ထီပေါက်လို့ အိမ်ဆောက်ရင် ပုံအလကားဆွဲပေး :)
အမကြီးရေ အနော်တို့အိမ်လေးဆောက်ရင် အမကြီးဒီဇိုင်းဆွဲပေးရမယ် :p ဒါပဲ
ဝေးမောင်မျိုး ဘိလပ်မြေတိုပဘာတို့မ၀ယ်နိုင်လဲ ဘာဖြစ်လဲဟ တို့အမကြီးဗိသုကာက အကုန် အိပ်စိုက်
ဆောက်ပေးသွားမှာပေါ့ :D ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ :)
အမကြီး security code ကို၃ ၄ ခါပြန်ရိုက်နေရတယ်ဗျို့ ကာလာဘလိုင်းဖြစ်နေပီလားမသိ ကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့ဘူး :)
စိတ်တစ်ခုရဲ့ shelter က ဘာဖြစ်နေမလဲမသိဘူးနော်
Shelter အကြောင်း လာဖတ်တယ် အစ်မရေ.. Shelter ဆိုမှ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စကားပုံလေးတွေ သွားသတိရမိသဗျ...
"သစ်တစ်ပင်ကောင်း၊ ငှက်တစ်သောင်းနား" တို့၊ နောက် "အရိပ်နေနေ၊ အခက်ချိုးချိုး" တို့.. "အရိပ်ပြ၊ အကောင်မြင်" တို့...
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ. စိတ်ထဲတွေးမိတာတွေ ပြောလိုက်တာပါ..
ဆက်လက်အားပေးလျက် ရှိပါကြောင်း. :)
ဗဟုသုတ ရစရာ Shelter အကြောင်း ဖတ်သွားပါတယ် ၊ ဗိသုကာတွေ ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ shelter လှလှလေးတွေမြင်ရင် စိတ်ဝင်စားတယ် ။ ။
မမရေ..ဘာရေးရေးစာဖတ်သူ စိတ်ဝင်စားအောင်ရေးနိုင်တယ်...အသင့်တင့်စိတ်ချရတဲ့ ..shelter..လေးတစ်ခုလောက်လက်ဆောင်ပေးပါလား.... :P :P
Shelter အကြောင်း လေးမပြောပြမှပဲ သေချာတွေးမိတော့တယ်။ ဗိသုကာလို့မပြောရဘူး
( အိမ်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင် လေးမဆီ ဆက်သွယ်မယ်နော်... အလကားဆွဲပေးမယ် မဟုတ်လား.. :D)
ဒီက အိမ်တွေကတော့ နေရာကျဉ်းတော့ မရ ရအောင် ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး အခန်းကို ပြင်ဆင်ထားတတ်ကြတယ်။ တော်တယ်လို့ပဲ ချီးကျူးရမလား အသက်ရှုကျပ်တယ်လို့ပဲ ဝေဖန်ရမလား မပြောတတ်တော့ဘူး လေးမရေ.. ဒါပေမယ့် အိမ်လေးတွေ၊ တိုက်ခန်းမှာ အခန်းဖွဲ့စည်းထားတာတွေက ချစ်ဖို့ကောင်းတာ အမှန်ပဲ။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ အင်ဂျင်နီယာ ပညာ၊ ဗိသုကာ ပညာဆိုလို့ ဘာမှ မသိ.. :P
Shelter ဆိုလို့ သရဲကား shelter အကြောင်းမှတ်လို့ ဘာတွေလဲသိဘူး။ =)
shelter ရှိပေမယ့် shelter ကြောင့် မွန်းကျပ်မနေတာ ကောင်းမယ်။
အကာအရံ ဆိုတာ လိုအပ်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် shelter က .. heavy shell ဖြစ်မနေသင့်ဘူး..